En vente actuellement 02/11/2018
Tasy sy olatra amin’ny tarehy, esory amin’ny tantely sy citron!
Tarehy madio, tsy misy pentina sady tsy ahitana tasy no tonga lafatra indrindra. Raha sendra misy ireo lesoka kely ireo ny hodi-tava, dia fantaro fa azo atao tsara ny manala azy ireny amin’ny akora natoraly, toy ny tantely, voasarimakirana, na menaka oliva. Atoronay anao ny fomba fanaovana azy :
Ireo vehivavy malaza, tsy menatra amin’ny vatany…
Tsy miahiahy ny amin’ny vatany na miafina amin’izay ananany mihitsy ireto vehivavy malaza ireto. Matetika mantsy no takiana amin’izy ireo ny ananany bika aman’endrika tonga lafatra saingy samy manana ny mampiavaka azy ny olona tsirairay. Mirehareha amin’izany izy ireo.
Indraindray, hono, zavatra kely monja manintona eny amin’ny lehilahy dia mety hahatonga antsika ho babo mandrakizay.
Zavatra kely sendra tsikaritsika fotsiny, indraindray aza no tsy tena misy dikany loatra, dia efa mety hamoha fitia ao anaty ao. Mety ho zavatra tokony hanorisory aza, saingy tsy arakarak’izay fa lasa mahalatsa-pitia antsika tanteraka. Dia eo isika ilay miteny hoe : mahafatifaty loatra !
Poelée façon paella
Akora ilaina · Vary 1 kpk · Nofon’akoho 150g · Patsa be 150g · Saosisy chorizo 80g · Poavrao 2 · Tongolo be 1 · Petit pois 100g · Haricots verts 50g · Tongolo gasy hasiny 1 lehibe · Safran 2 tsongo · Menaka oliva · Rano · Kioba manome tsiro · Calamar 50g · Bolety amin’ny trondro 50g · “Noix Coquilles St Jacques” 50g
“Nutella” miloko fotsy : na niparitaka ny sary nefa mbola tsy misy
Niparitaka manerana ny tambazotra “Instagram” ny horonan-tsary mampiseho « Nutella », ilay patina sôkôla malaza vokarin’ny orinasa Ferrero, miloko fotsy.
Nodarohany ny zanany ary notapahany ny lohany
Namono ny zanany vao 8 volana i Natalia Klob, renim-pianakaviana 25 taona, niteraka 3, sy ny namany, Viktor, 47 taona.
Nihena 60% ny biby dia eran-tany, tao anatin’ny 44 taona
Araka ny tatitra vao navoakan’ny WWF, izay Tahirin’ny Firenena Mikambana ho an’ny tontolo iainana sy ny zava-boaary, dia nihena 60% ny biby dia eran-tany teo anelanelan’ny taona 1970 hatramin’ny taona 2014.
Nendrikendrehin’ny sipako ho mampirafy azy aho, ka nisarahany. Tsy misy an’izany akory anefa, sady izaho tia be azy. Mba ampio aho fa mijaly.
Azo inoana fa mbola tanora kely ianao manoratra io, tahaka izay koa ilay olon-tianao, ka tsy mbola matotra ny fitiavanareo.
Karazana paozy azo atao, amin’ny fahavaratra
Efa miditra tsikelikely ao anatin’ny vanim-potoanan’ny orana isika izao. Na dia mbola tsy avy matetika aza ny orana dia tsara hatrany ny miomana amin’izany. Ireto indray ary ny soso-kevitra paozy mandritra ny herinandro entina miatrika ny orana.
Iza avy ireo mivarotra kojakojan-dakozia ao anaty Facebook ?
Ho an’ireo tsy afaka mandeha miantsena, vaha-olana amin’izy ireny ny fividianana ny entana ao anaty Facebook.
Ny atao, mba tsy harary rehefa manala volomaso
Marary ny fanalana volomaso raha vao tsy mahafehy tsar any teknika fanaovana azy. Ity fomba iray ity anefa dia azo hisorohana izany soa aman-tsara. Alikaola no ampiasaina.
O ! Festif Rasta Andoharanofotsy : Jaovavy dance hall party manomboka amin’ny 9 ora alina